Abazali mabazibhalisele izitifiketi – Msunduzi News
Abazali mabazibhalisele izitifiketi
KUHLONISHWA ingqalabutho yomzabalazo engasekho yaseNingizimu uDkt uNelson Mandela, uSekela Mphathiswa Wezasekhaya usanda kuhambela izindawo zikaHulumeni eziningi edolobheni emizamweni yokukhuthaza abantu ukuba babhalisele izitifiketi zokuzalwa nomazisi.
Uhlelo obeluhanjelwe yiMeya yoMgungundlovu uThobeka Maphumulo neMeya yoMsunduzi uThemba Njilo, luqale e-Edendale Hospital lapho abadlezane begqugquzelwe ukuba bafake izicelo zezitifiketi zokuzalwa zezinsana esikhathini esiyizinsuku ezingama-30 emveni kokubeletha. Luphelele kwaPoyinandi Hall eduze kwase-Ashdown okuyindawo yokuhola izibonelelo
Elokubhalisa izinsana ngesikhathi zisesibhedlela lwathulwa ngokusemthethweni uMnyango Wezasekhaya ngowezi-2013. Lokhu sekwenza ukuba izibhedlela nemitholampilo kaHulumeni kube namahhovisi amancane oMnyango Wezasekhaya kulezi zikhungo. Selokhu lwaqala lolu hlelo ngowezi-2013, ngokocwaningo olwenziwa yiStatistics South Africa ngowezi-2017, isifundazwe iNorth West inesibalo esikhulu esibhalisa izinsana esingama-92%, kulandele iKwaZulu Natal ngama-66%.
Ekhuluma nephaphandaba iMsunduzi News, uSekela Mphathiswa uthe yize kunezibhedlela eziningi esifundazweni ezithola ukusizakala eMnyangweni Wezasekhaya kodwa baqoke ukuhambela isibhedlela sase-Edendale ngoba ngolwazi abalutholile kunezinsana ezingama-200 ezizalwa njalo ezinyangeni ezintathu. Uthe lokhu kusemqoka konina bezinsana ukuba bazibhalisele izitifiketi zokuzalwa ukuze izingane zingahlangabezani nezinkinga uma sezindala. Ubuye wagqugquzela omama ukuba baphathe omazisi ukuze kube lula ukufaka izicelo zezitifiketi zokuzalwa. Yize uhlelo lubukeka luhamba kahle uNzuza ukuvezile ukukhathazeka kwakhe kokuthi obaba abaningi ababi yingxenye yakho konke lokhu. “Manje sesinezitifiketi ezingafinyeziwe ezidinga yonke imininingwane yabazali bobabili. Uma obaba bengezi nemininingwane yabo lokho kudodobalisa inqubekelaphambili yokutholakala kwezitifiketi njengoba zingeke ziphume ngaphandle kwemininingwane kababa,” kugcizelela uNzuza
Ngowezi-2015 uMnyango Wezasekhaya wethule isitifiketi esingafinyeziwe ngaphansi kweMithetho Yezifiki ukuze kuvikelwe izingane zingabi abagilwa bokushushumbiswa kwezingane.
Omunye womama uThandi Dlamini, uthe kuwukuphila okusha okwenza ukuba abadlezane bangabi besashaya uhide lwemigqa ukuze bafake izicelo zezitifiketi zokuzalwa.
UMeya woMsunduzi uThemba Njilo uthe njengoMasipala bazimisele ukweseka lolu hlelo ngokusakaza lo myalezo emiphakathini eminingi.
UMsunduzi wenza ngakho kwezokuvakasha
Idolobha ligqugquzela amaqhinga akha ubuhlobo ngemidlalo
Previous post: Alunikwe indawo emqoka ulimizimpawu
Next post: Kugqugquzelwe abasha ukonga imali yabo